သင်ကွန်ပျူတာ IP ADDRESS ကို၏တည်နေရာကိုဘယ်လိုသိသလဲ - WINDOWS ကို - 2019
ပေါ်ကွန်ပျူတာရဲ့ IP address ကိုတွက်ချက်ဖို့ကဖြစ်နိုင်ပါတယ်
က MS နှုတ်ကပတ်တော်၌ Footer - ဒီအသီးအသီးစာမျက်နှာကစာသား document ရဲ့ထိပ်, အောက်ခြေနှင့်နှစ်ဖက်မှာတည်ရှိပါတယ်ဧရိယာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါခေါင်းစဉ်နှင့်အောက်ခြေသူတို့ကိုသင်လိုအပ်သည့်အခါတိုင်းလမ်းဖြင့်, သင်သည်အစဉ်အမြဲပြောင်းလဲနိုင်သည်သော, စာသားသို့မဟုတ်ဂရပ်ဖစ်ဆံ့နိုငျသညျ။ ဒါဟာသင်စာရွက်စာတမ်းသို့မဟုတ်ပေးထားသောအခြေအနေမှာလိုအပ်သည့်အခြားအချက်အလက်များ၏စာရေးဆရာ, ခေါင်းစဉ်, ဖိုင်အမည်ကိုသတ်မှတ်, ရက်စွဲနှင့်အချိန်, ကုမ္ပဏီလိုဂို add, စာမျက်နှာနံပါတ်များပါဝင်နိုင်ပါသည်ရှိရာစာမျက်နှာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု (s) ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော်ညွှန်ကြားချက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့အတိအကျကို Microsoft ကနေရုံးထုတ်ကုန်များ၏အစောပိုင်းမူကွဲသက်ဆိုင်ပါလိမ့်မည် 2016 - ဒီဆောင်းပါးမှာပါကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကို 2010 ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးထဲက footer ထည့်သွင်းဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆိုကြလိမ့်မည်
တစ်ဦးချင်းစီစာမျက်နှာပေါ်တွင်အတူတူ headers နှင့် Footer Add
စာသားမစာရွက်စာတမ်းများခုနှစ်တွင်သမ်မာကမျြးစာမကျြနှာမှဆက်ပြောသည်နိုင်အဆင်သင့် Footer ဖြစ်ကြသည်။ အလားတူပင်, သင်လက်ရှိပြုပြင်မွမ်းမံသို့မဟုတ်အသစ် headers နှင့် Footer ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ အောက်ကညွှန်ကြားချက်အသုံးပြုခြင်း, သငျသညျ, စာရွက်စာတမ်း, စာရေးသူအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်အဖြစ်အခြားသတင်းအချက်အလက်များ၏အမည်ကိုဤကဲ့သို့သောဖိုင်အမည်, စာမျက်နှာနံပါတ်များ, နေ့စွဲနှင့်အချိန်အဖြစ် headers နှင့် Footer ပစ္စည်းများထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
အဆင်သင့် footer ထည့်သွင်းခြင်း
1. tab ကိုသွားပြီး "ထည့်"အဆိုပါအုပ်စုတွင် "Header ကိုနှင့် Footer" ထိပ်တန်းသို့မဟုတ်အောက်ဆုံး - သငျထဲက footer add ချင်သောအရာကိုရွေးချယ်ပါ။ သင့်လျော်သောခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ညာကလစ်မီနူးထဲမှာ 2. သင့်တော်တဲ့အမျိုးအစားတစ်ခုအဆင်သင့် (template ကို) header ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
စာရွက်စာတမ်း၏စာမကျြနှာတှငျ 3. header ကိုသို့မဟုတ်ထဲက footer မှဆက်ပြောသည်လိမ့်မည်။
ကောင်စီ: လိုအပ်မယ်ဆိုရင်သင်အမြဲထဲက footer တွင်ပါရှိသောစာသား၏ပုံစံချပေးပြောင်းလဲနိုင်သည်။ တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်လှုပ်ရှားမှုကိုစာရွက်စာတမ်း၏အဓိကအကြောင်းအရာမဖြစ်သင့်ကြောင်းနှင့်, header ကိုနှင့်အောက်ခြေ၏ဧရိယာနှင့်အတူဤနှုတ်ကပတ်တော်၌မဆိုအခြားစာသားကဲ့သို့တူညီသောလမ်း၌ပြစ်မှားမိသည်။
မိမိစိတ်ကြိုက် header ကိုထည့်သွင်းခြင်း
အုပ်စုတစုထဲမှာ 1. "Header ကိုနှင့် Footer" (tab ကို "ထည့်"အောက်ခြေသို့မဟုတ်ထိပ်တန်း -), သငျသညျထဲက footer add ချင်ရာကိုရွေးချယ်ပါ။ control panel ထဲကအပေါ်သက်ဆိုင်ရာခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
အဆိုပါ right-click menu ကို2ကို select လုပ်ပါ "အောက်ခြေကိုပြောင်း ... ".
စာရင်းတွင် 3. အောက်ခြေဧရိယာပြသ။ အဆိုပါအုပ်စုသည် "ထည့်"tab မှာဘယ်ဖြစ်ပါသည် "ဒီဇိုင်နာ"သင် header ကိုထည့်သွင်းချင်သောအရာကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
စံစာသားကိုအပြင်, သငျသညျအောကျပါအ add နိုင်သည်
(hard drive ကိုနှင့်အတူ) ရေးဆွဲ;
မှတ်ချက်: သင်တစ်ဦးထဲက footer သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နိုင်ပါသည်ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ ဒီအလုပျသူ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမီးမောင်းထိုးပြခြင်းနှင့် control panel ကိုအပေါ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ဖို့ "သစ်တစ်ခုထဲက footer အဖြစ်သိမ်းဆည်းရွေးချယ်ရေး ... " (အကြိုတစ်ဦးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ menu ကို header ကိုလုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့ဖို့လိုအပ်ပါတယ် - အထက်သို့မဟုတ်အောက်ပိုင်း) ။
ပထမဦးဆုံးနှင့်နောက်ဆက်တွဲစာမျက်နှာများများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသော headers နှင့် Footer Add
1. ပထမဦးဆုံးစာမျက်နှာပေါ်မှခေါင်းစဉ်သို့မဟုတ်အောက်ခြေဧရိယာကို Double-click လုပ်ပါ။
အပိုင်း2"ခေါင်းစီးနဲ့ footer အသုံးပြုခြင်း" tab ကိုပေါ်လာပါလိမ့်မယ် "ဒီဇိုင်နာ", ဒါဟာအုပ်စု, က၌တည်ရှိ၏ "န့်သတ်ချက်များ" အမှတ်အနီး "ပထမစာမျက်နှာအထူးထဲက footer" တစ်ဦးကို tick တည်ထောင်ရန်သင့်ပါတယ်။
မှတ်ချက်: သင်ပြီးသား installed ပြီဤ box စစ်ဆေးပါကမလိုအပ်ပါဘူးဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ လာမယ့်ခြေလှမ်းဖို့ skip ။
3. လယ်ပြင်ရဲ့ contents ဖျက်ပစ်ပါ "ပထမစာမျက်နှာရဲ့ခေါင်းစဉ်" သို့မဟုတ် "ပထမဦးဆုံးစာမျက်နှာ footer".
အချို့အမျိုးအစားများ၏စာရွက်စာတမ်းများကိုထူးဆန်းနှင့်ပင်စာမျက်နှာများပေါ်တွင်ကွဲပြားခြားနားသော headers နှင့် Footer ကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ အခန်းခေါင်းစဉ်ဥပမာ - အဘို့, တဦးတည်းအပေါ်တစ်ဦးစာရွက်စာတမ်းခေါင်းစဉ်, ဒါပေမယ့်အခြားအပေါ်ပေးထားနိုင်ပါသည်။ လက်ဝဲမှ - သို့မဟုတ်ဥပမာ, ဘရိုရှာကိုလက်ျာဘက်ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးအရေအတွက်ကိုအပေါ်ထူးဆန်း-ရေတွက်စာမျက်နှာများကိုနိုင်အောင်, ပင်ကိုဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောစာရွက်စာတမ်းများစာမျက်နှာ၏နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ပုံနှိပ်နေတယ်ဆိုရင်, စာမျက်နှာနံပါတ်များကိုအစဉ်အမြဲအနားအနီးတည်ရှိသောလိမ့်မည်။
အဘယ်သူမျှမ header ကိုသို့မဟုတ်ထဲက footer သည့်စာရွက်စာတမ်း၏ကွဲပြားခြားနားသောစာမျက်နှာများပေါ်တွင် headers နှင့် Footer ထည့်သွင်းခြင်း
1. (ဥပမာ, ပထမဦးဆုံး) စာရွက်စာတမ်းများ၏ထူးဆန်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်လက်ဝဲဘက် mouse ကိုခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
အဆိုပါ tab ကိုခုနှစ်တွင် 2. "ထည့်" ကိုရွေးချယ်ပြီးကလစ်နှိပ်ပါ "Header ကို" သို့မဟုတ် "Footer"အဆိုပါအုပ်စုတွင်တည်ရှိသည် "Header ကိုနှင့် Footer".
3. တစ်ဦးထားသောစာပိုဒ်တိုများရှိရာ၏နာမ၌, သင့်လျော်သောအပြင်အဆင်များထဲမှသင်ကိုရွေးချယ်ပါ "မကိန်း Footer".
အဆိုပါ tab ကိုတွင် 4. "ဒီဇိုင်နာ"ဘယ်အုပ်စု, header ကိုရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ဖြည့်စွက်ပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းသော "န့်သတ်ချက်များ", အပိုဒ်မှဆန့်ကျင် "ထူးဆန်းနှင့်ပင်စာမျက်နှာများကိုများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောခေါင်းစီးများ" box ကိုစစ်ဆေးပါ။
5. tab ကိုစွန့်ခွာမနေပါနဲ့ "ဒီဇိုင်နာ"အဆိုပါအုပ်စုတွင် "ကူးအပြောင်းကာလ" စာနယ်ဇင်းများ "ရှေ့သို့" (က MS Word ရဲ့အဟောင်းတွေဗားရှင်းမှာတော့ဤအကြောင်းအရာအားဟုခေါ်သည် "Next ကိုအပိုင်း") - ဒီထဲက footer အတွက်တောင်မှစာမျက်နှာ cursor ရွှေ့မည်။
အဆိုပါ tab ကိုခုနှစ်တွင် 6. "ဒီဇိုင်နာ" အုပ်စုတစ်စု "Header ကိုနှင့် Footer" စာနယ်ဇင်းများ "Footer" သို့မဟုတ် "Header ကို".
7. ညာကလစ်မီနူးထဲမှာတစ်ဦး layout ကိုအောက်ခြေကို select, ထိုထားသောစာပိုဒ်တိုများပါရှိသောအရာ၏နာမ၌ "တောင်မှစာမျက်နှာများ".
ကောင်စီ: လိုအပ်မယ်ဆိုရင်သင်အမြဲထဲက footer တွင်ပါရှိသောစာသားပုံစံပြုပြင်နိုင်သည်။ ဒါဟာ header ကိုတည်းဖြတ်နှင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကို default အရရှိနိုင်စံပုံစံချပေး tools တွေကိုသုံးစွဲဖို့ထိုဒေသတွင်ဖွင့်လှစ်ဖို့ကို double-click ဖို့လုံလောက်တဲ့ပါပဲ။ သူတို့က tab မှာဖြစ်ကြောင်း "အိမ်".
ပြီးသား Footer ရှိပါတယ်တဲ့စာရွက်စာတမ်း၏ကွဲပြားခြားနားသောစာမျက်နှာများပေါ်တွင် headers နှင့် Footer ထည့်သွင်းခြင်း
1. စာရွက်ထဲမှာလယ်ပြင် header ကိုပေါ်လက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ်ကို Double-click လုပ်ပါ။
အဆိုပါ tab ကိုခုနှစ်တွင် 2. "ဒီဇိုင်နာ" ပစ္စည်းဆန့်ကျင် "ထူးဆန်းနှင့်ပင်စာမျက်နှာများကိုများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောခေါင်းစီးများ" (အုပ်စုတစ်စု "န့်သတ်ချက်များ") box ကိုစစ်ဆေးပါ။
မှတ်ချက်: တည်ဆဲထဲက footer ယခုသင် tuning စတင်ရန်အရာတစျခုနှင့်အတူပေါ် မူတည်. သာသာပင်ထူးဆန်းသို့မဟုတ်စာမျက်နှာများပေါ်တွင်တည်ရှိသည်လိမ့်မည်။
အဆိုပါ tab ကိုတွင် 3. "ဒီဇိုင်နာ"အုပ်စုတစ်စု "ကူးအပြောင်းကာလ"စာနယ်ဇင်းများ "ရှေ့သို့" (သို့မဟုတ် "Next ကိုအပိုင်း"), အ cursor ကိုနောက် header ကို (တောင်မှထူးဆန်းသို့မဟုတ်) စာမျက်နှာသို့ပြောင်းရွှေ့ထားပြီးဖြစ်သည်။ ရွေးချယ်ထားသောစာမျက်နှာအသစ်တစ်ခု header ကိုဖန်တီးပါ။
မတူညီသောအခန်းကြီးနှင့်ပုဒ်မများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသော headers နှင့် Footer Add
မကြာခဏကဏ္ဍများသို့ပြိုပျက်ပညာရေးဆိုင်ရာစာတမ်းတစ်စောင်တင်သွင်း, အစီရင်ခံစာများ, စာအုပ်များ, ဖြစ်နိုင်သည်နှင့်များစွာသောစာမျက်နှာများ, အတူ documents ။ က MS နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအစီအစဉ်ကိုအင်္ဂါရပ်တွေကိုသင်သည်ဤပုဒ်မအဘို့ပြုခွင့်ပြုကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းအရာများကိုနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသော headers နှင့် Footer ဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျ, အလုပ်မလုပ်သောစာရွက်စာတမ်းတစ်ခုချင်းစီကိုအခနျးကွီး၏ header ဧရိယာ၌အခန်းကြီး Break များအပိုင်းသို့ကွဲပြားလျှင်ဥပမာ, သငျသညျ၎င်း၏အမည်ကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
အချို့ကိစ္စများတွင်ပါကစာရွက်စာတမ်းကွာဟချက်များပါဝင်သည်ရှိမရှိမသိနိုင်ပါဘူး။ သငျသညျမသိလျှင်, သင်အောက်ပါလုပ်ဖို့လိုအပ်သောသူတို့အဘို့ကိုကြည့်နိုင်သည်
1. tab ကိုသွားပြီး "View" နှင့်အမြင် mode ကိုအကူးအပြောင်း "မူကြမ်း".
မှတ်ချက်: အဆိုပါအစီအစဉ်တွင်ပွင့်လင်း mode ကို default "စာမျက်နှာ Layout".
2. tab ကိုသွားပြီး "အိမ်" နှင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ဤနေရာသို့သွားရန်"အုပ်စုတစုအတွက်စီစဉ်ပေး "ကိုရှာပါ".
ကောင်စီ: ဒီ command ကို run ရန်, သင်သည်လည်းသုံးနိုငျ "ကို Ctrl + G နဲ့".
အုပ်စုအတွက်ပေးတဲ့ dialog box ကို3"အကူးအပြောင်းအရာဝတ္ထု" ကို select "ပုဒ်မ".
4. ကိုယ့်ကို click, စာရွက်စာတမ်းအပိုင်းလပ်ချိန်ကိုရှာဖွေရန် "Next ကို".
မှတ်ချက်: မူကြမ်း mode မှာစာရွက်စာတမ်းအလွန်အမြင်အာရုံရှာဖွေရေးရိုးရှင်းစွာနှင့်ပုဒ်မလပ်ချိန် browse, သူတို့ကိုပိုပြီးမြင်နိုင်အောင်ရှုမြင်ကြသည်။
သင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေကြစာရွက်စာတမ်း, သေးသောကဏ္ဍများသို့ဝေဖန်လျက်နေကြသည်မဟုတ်, သင်မူကားတစ်ဦးချင်းစီအခနျးကွီးနှင့် / သို့မဟုတ်အပိုင်းများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသော headers နှင့် Footer လုပ်ချင်လျှင်, သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်အပိုင်းလပ်ချိန်ထည့်ပါ။ အောက်ကလင့်ခ်မှာဆောင်းပါး၌ဤလုပ်ဖို့ဘယ်လိုသတင်းအချက်အလက်သည်။
သင့်ရဲ့စာရွက်စာတမ်းအတွက်အပိုင်းလပ်ချိန်ထည့်သွင်းပြီးနောက်, သငျသညျထိုသူတို့အားသက်ဆိုင်ရာ headers နှင့် Footer ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆက်လက်နိုင်ပါတယ်။
အပိုင်းလပ်ချိန်ကို အသုံးပြု. ကွဲပြားခြားနားသော headers နှင့် Footer add နှင့် configure
စာရွက်စာတမ်းပြီးသားငှါချိုးဖဲ့သောအပေါ် partitions, ထိုခေါင်းစဉ်နှင့်အောက်ခြေစိတ်ကြိုက်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
စာရွက်စာတမ်းများ၏ရှေ့ဦးစွာ မှစ. 1. မဲရေတွက်, သငျသညျ (အကောင်အထည်ဖော်ရန်) အခြားထဲက footer ဖန်တီးချင်သောပထမဦးဆုံး partition ကို click လုပ်ပါ။ ဤသည်စာရွက်စာတမ်း၏, ဥပမာ, ဒုတိယသို့မဟုတ်တတိယအပိုင်း၎င်း၏ပထမဦးဆုံးစာမျက်နှာရှိနိုင်ပါသည်။
2. tab ကိုသွားပြီး "ထည့်"အထက်သို့မဟုတ်ထဲက footer (အုပ်စုသည်အဘယ်မှာရှိကို select "Header ကိုနှင့် Footer") ရိုးရိုးခလုတ်များ၏တဦးတည်းအပေါ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ right-click menu ကို3ကို select လုပ်ပါ "အောက်ခြေကိုပြောင်း ... ".
အဆိုပါ tab ကိုတွင် 4. "Header ကိုနှင့် Footer" ရှာကလစ်နှိပ်ပါ "ယခင်ကဲ့သို့" ("ယခင်ရန် Link ကို" အုပ်စုတစုမှာတည်ရှိပါတယ်သောက MS Word ရဲ့အဟောင်းတွေဗားရှင်း), အတွက် "ကူးအပြောင်းကာလ"။ ဒါဟာလက်ရှိ document ရဲ့အောက်ခြေကနေပြတ်တောက်သွားပါသည်။
အဆိုပါ tab ကိုခုနှစ်တွင် 6. "ဒီဇိုင်နာ"အုပ်စုတစ်စု "ကူးအပြောင်းကာလ"့ dropdown menu ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ရှေ့သို့" ("Next ကိုအပိုင်း" -) အဟောင်းတွေဗားရှင်းပါ။ ဒါဟာလာမယ့်အပိုင်း၏ header သို့မဟုတ်ထဲက footer အတွက် cursor ရွှေ့မည်။
7. ထပ်ခြေလှမ်း 4ယခင်တဦးတည်းနှင့်အတူအပိုင်း၏ link ကိုခေါင်းစဉ်နှင့်အောက်ခြေကိုချိုးဖျက်ဖို့။
လိုအပ်ခဲ့လျှင် 8 ထဲက footer ပြောင်းနည်း, သို့မဟုတ်ဤအသစ်တစ်ခုအပိုင်းဖန်တီးပါ။
7. ထပ်ခါတလဲလဲခြေလှမ်းများ6- 8 စာရွက်စာတမ်းအတွက်ကျန်ရှိနေသောကဏ္ဍများအဘို့, ဆိုလျှင်။
မျိုးစုံ partitions ကိုများအတွက်တူညီ header ကိုထည့်သွင်းခြင်း
အစောပိုင်းကကျနော်တို့စာရွက်စာတမ်းကွဲပြားခြားနားသော headers နှင့် Footer ၏ကွဲပြားခြားနားသောကဏ္ဍများအဘို့ဖြစ်စေခြင်းငှါဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းဟောပြောသည်။ အလားတူပဲ, နှုတ်ကပတ်တော်၌, သင်ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုနိုင်သည် - အတော်ကြာကွဲပြားခြားနားသောကဏ္ဍများအတွက်တူညီသောခေါင်းစဉ်သို့မဟုတ်ထဲက footer သုံးစွဲဖို့။
သငျသညျကိုယျတျောနှငျ့စစ်ဆင်ရေးဖွင့်ဖို့သော့တစ်အရေအတွက်အသုံးပြုချင်ထဲက footer အပေါ် 1. ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပါ။
အဆိုပါ tab ကိုခုနှစ်တွင် 2. "Header ကိုနှင့် Footer"အုပ်စုတစ်စု "ကူးအပြောင်းကာလ"စာနယ်ဇင်းများ "ရှေ့သို့" ("Next ကိုအပိုင်း").
ထဲက footer မှာတော့3စာနယ်ဇင်း "ယခင်အပိုင်းအတွက်အမျှ" ("ယခင်ရန် Link ကို").
မှတ်ချက်: သငျသညျကို Microsoft Office ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကို 2007 ခုနှစ်ကိုသုံးပါလျှင်, သင်ယခင်အခန်းကိုပိုငျဆိုငျသောသူတို့နှင့်အတူလက်ရှိ headers နှင့် Footer နှင့်ဆက်သွယ်ရေး၏ဖွဲ့စည်းခြင်းဖယ်ရှားပစ်ရန်တောင်းဆိုမှုမြင်လိမ့်မည်။ ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ရည်ရွယ်ချက်များကိုအတည်ပြု "Yes" ကို.
အဆိုပါ tab ကိုခုနှစ်တွင် 1. "ထည့်"အုပ်စုတစ်စု "Footer"အဆိုပါခေါင်းစဉ်သို့မဟုတ်အောက်ခြေကို Select လုပ်ပါ, သင်ကိုပြောင်းလဲလိုသည့်ရဲ့ contents - ထိပ်သို့မဟုတ်အောက်ဆုံး။
2. ထဲက footer right-click menu ထဲမှာသင့်လျော်သော button ကို Click ကို select "အောက်ခြေကိုပြောင်း ... ".
3. စာသားကိုခေါင်းစဉ်ကို Select လုပ်ပါနှင့် built-in သမ်မာကမျြးအစီအစဉ်ကို အသုံးပြု. လိုအပ်သောအပြောင်းအလဲများ (font ကို, အရွယ်အစား, ပုံစံ) ပါစေ။
အဆိုပါခေါင်းစဉ်ကိုပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာ 4, ထိုပြင်ဆင်ရန် mode ကို disable လုပ်ဖို့စာရွက်၏အလုပ်လုပ်သောဧရိယာပေါ်ကို double-click လုပ်ပါ။
အဆိုပါ headers နှင့် Footer နှင့်အခြားသူများကိုပြောင်းလဲတူညီသောလမ်းအတွက် 5. လိုအပ်မယ်ဆိုရင်။
က MS နှုတ်ကပတ်တော်၌ headers နှင့် Footer အသုံးပြုခြင်း, သငျသညျစာမျက်နှာနံပါတ်များကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ ထိုသို့ပြုမှမည်ကဲ့သို့သင်ယူဖို့, သင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလင့်ခ်မှာဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှုနိုင်သည်
ဖိုင်တစ်ဖိုင် name ကိုထည့်ရန်
1. သင်ဖိုင် name ကို add ချင်ရှိရာ header ကိုသို့မဟုတ်ထဲက footer ၏အစိတ်အပိုင်းဖို့ cursor ရွှေ့ပါ။
2. tab ကိုသွားပြီး "ဒီဇိုင်နာ"ယင်းအပိုင်းတွင်တည်ရှိသည် "ခေါင်းစီးနဲ့ footer အသုံးပြုခြင်း"ထိုအခါစာနယ်ဇင်း "လျင်မြန်စွာအစိတ်အပိုင်းများ" (အုပ်စုတစ်စု "ထည့်").
3. ကို Select လုပ်ပါ "ကွင်းဆင်း".
အဆိုပါစာရင်းထဲတွင်, သင်များ၏ရှေ့မှောက်၌ပေါ်လာသောပေးတဲ့ dialog box ကိုခုနှစ်တွင် 4. "Fields" ကို select "FILENAME".
သငျသညျဖိုင်အမည်ကိုလမ်းကြောင်းထဲမှာထည့်သွင်းရန်လိုလျှင်ကို tick အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ဖိုင်အမည်ကိုမှလမ်းကြောင်းကို Add"။ သငျသညျကိုလညျး header ကို format ကိုရွေးနိုင်သည်။
5. ဖိုင်အမည်ထဲက footer မှာပြပါလိမ့်မည်။ ပြင်ဆင်ရန် mode ကိုစွန့်ခွာရန်, သင်ထောက်ကူတခုတခုအပေါ်မှာအချည်းနှီးသောဧရိယာပေါ်ကို double-click လုပ်ပါ။
မှတ်ချက်: သငျသညျထဲက footer အတွက် add မတိုင်မီဒီတော့လယ်ပြင် codes တွေကိုတစ်ခုချင်းစီအသုံးပြုသူမြင်စေခြင်းငှါတစ်ဦးစာရွက်စာတမ်း၏နာမတော်ကိုထက်အခြားအရာတစ်ခုခုဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်သင်ကစာဖတ်သူများအနေဖြင့်ဖုံးကွယ်ထားချင်ပါတယ်သောသတင်းအချက်အလက်မရကြောင်းသေချာပါစေ။
အဆိုပါစာရေးသူ၏အမည်, ခေါင်းစဉ်, နှင့်အခြားစာရွက်စာတမ်းဂုဏ်သတ္တိများထည့်သွင်းခြင်း
1. ရာထူးသင်စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောဂုဏ်သတ္တိများကိုထည့်သွင်းချင်ရှိရာတည်နေရာထဲက footer မှာ cursor ။
အဆိုပါ tab ကိုခုနှစ်တွင် 2. "ဒီဇိုင်နာ" အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "လျင်မြန်စွာအစိတ်အပိုင်းများ".
3. ကို Select လုပ်ပါ "စာရွက်စာတမ်း Properties ကို"တဖန်သင်တို့ကိုထည့်သွင်းလိုသောတင်ပြဂုဏ်သတ္တိများ၏ထားတဲ့ရွေးရန် right-click menu ထဲမှာ။
5. ပြင်ဆင်ရန် mode ကို headers နှင့် Footer ထားခဲ့ဖို့စာရွက်၏အလုပ်လုပ်သောဧရိယာပေါ်ကို Double-click လုပ်ပါ။
1. ရာထူးသင်လက်ရှိနေ့စွဲ add ချင်ရှိရာတည်နေရာထဲက footer မှာ cursor ။
အဆိုပါ tab ကိုခုနှစ်တွင် 2. "ဒီဇိုင်နာ" စာနယ်ဇင်းများ "နေ့စွဲနှင့်အချိန်"အုပ်စုတစုအတွက်စီစဉ်ပေး "ထည့်".
ပေါ်လာစာရင်းထဲမှာ3"ရရှိနိုင်တဲ့ကို formats" ရက်စွဲရေးသားခြင်း၏ပုံစံကိုရွေးချယ်ပါ။
4. သင်ထည့်သွင်းအဆိုပါဒေတာထဲက footer အတွက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
5. control panel ကိုကို (tab ကိုအပေါ်သက်ဆိုင်ရာခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်တည်းဖြတ် mode ကိုပိတ်ပြီး "ဒီဇိုင်နာ").
headers နှင့် Footer ကိုဖယ်ရှား
သင်တစ်ဦးဟာ Microsoft Word document ထဲတွင် headers နှင့် Footer မလိုအပ်ပါဘူးဆိုရင်သူတို့ကအမြဲဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ ထိုသို့ပြုမှမည်ကဲ့သို့သင်ယူဖို့, သင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလင့်ခ်မှာတင်ဆက်မယ့်စက္ကူဖတ်နိုင်သည်
သင်ခန်းစာ: နှုတ်ကပတ်တော်၌ထဲက footer ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
ဆိုလိုသည်မှာယခုသင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်နှင့်သူတို့ကိုပြောင်းပေးဖို့ကိုဘယ်လို, က MS နှုတ်ကပတ်တော်၌ headers နှင့် Footer add ဖို့ဘယ်လိုသိအားလုံးပါပဲ။ ထို့အပြင်ယခုသင်ကုမ္ပဏီအမည်နှင့်စာရွက်စာတမ်းသိုလှောင်ထားသည်အဘယ်မှာရှိဖိုင်တွဲရန်အလမ်းကြောင်းကိုအဆုံးသတ်ရေး, စာရေးဆရာရဲ့အမည်နှင့်စာမျက်နှာဂဏန်းကနေလုံးဝနီးပါးမဆိုသတင်းအချက်အလက်တစ်ခုထဲက footer add နိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်သိကြ၏။ ငါတို့သည်သင်တို့တစ်တန်ဖိုးရှိရှိသာအပြုသဘောရလာဒ်များအလိုရှိ၏။